Akon’ny teny Soamandrakizay | NewsMada
Akon’ny teny Soamandrakizay
Vehivavy iray manodidina ny 60 taona eo ho eo no namoy ny ainy, ny alin’ny asabotsy teny Soamandrakizay tao anatin’ny alim-bavaka, araka ny vaovao nampitain’ny jeneraly Andrianjanaka Njatoarisoa, omaly. Efa manana aretina mitaiza sohika izy, noho ny vovoka sy ny hatsiaka niseho tao anatin’ny velarana midadasika, nitranga ny « crise ». Noezahina noentina tao amin’ny toeram-pitsaboana teo an-toerana izy fa tsy tana ny ainy.
19 ny ankizy very, ny tapakandro maraina, teny Soamandrakizay nandritra ny Sorona Masina notarihin’i Papa Fransoa, omaly teny an-toerana. Efatra tamin’ireo tsy hitan’ny reniny ka tonga nanatona teny amin’ny sampandraharaha « logistique » nametraka laharana azo iantsoana ireo renim-pianakaviana ireo raha sendra misy mahita ny zanany. Ny ambiny, nentin’ny olona teo fa hita nivezivezy teny rehetra teny. Mpivahiny avy any amin’ny faritra ny ankamaroany. Naterin’ny polisy eny amin’ny masera ao Sabotsy Namehana ireo zaza telo mianadahy tsy mbola nalain’ny havany taorian’ny fahaverezany nandritra ny lamesa.
Momba ny fampisakafoana, anjantony ny trano heva nandray ireo mpivahiny efa nisoratra anarana mialoha. Samy nanana ny karazan-tsakafo nokarakarainy ny rehetra ka nanodidina ny 4 000 Ar ny vary sy ny laoka iray vilia, 500 Ar ny dite iray kaopy ary 3 000 Ar ny lasopy iray baolina. Zavatra nitoviana ny vovoka nifafy teny amin’ny latabatra sy ny seza ary ny sakafo tsy napetraka anaty vata fitaratra. Nanahirana ihany koa ny rano fa tsy maharaka ny filan’ny mpikarakara sakafo sady mbola vidiana rahateo.
Nanahirana ny toeram-pivoahana satria tsy naharaka ny isan’ny olona tonga teny Soamandrakizay, omaly. Filaharana be lavareny no hita teny amin’ny fotodrafitrasa natokana ho an’izany ka ireo tsy nahazaka nilahatra nanao teny ankalamanjana tsy nisy henatra intsony. Ny toeram-pivoahana tety ambony ho an’ny olona manan-kaja kosa nilamina ary nanaraka fenitra ara-pahadiovana tanteraka (rano, savony, taratasy…).
Nidina ny mari-pana teto an-dRenivohitra ary nitsoka mafy ny rivotra nampisamboaravoara ny vovoka teny Soamandrakizay. Efa nivonona anefa ny rehetra tamin’ny akanjo sy ny lamba firakotra, indrindra ireo nanaraka ny alim-bavaka. Nandeha mihitsy ny varotra dite sy kafe teny amin’ny trano heva.
Nanaraka tsara ny fandaharam-potoana napetraka mialoha ny fizotran’ny hetsika rehetra tao anatin’ny telo andro voalohany ho an’ny fitsidihana nataon’ny Papa Fransoa teto amintsika. Voahaja avokoa ny ora fanombohana sy ny faharetana. Tsara alain-tahaka amin’ny hoavy.